Isibhedlela Esixhumene Sesibili saseHarbin Medical University - iShenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isibhedlela Esibambisene Sesibili saseHarbin Medical University
Isibhedlela Esibambisene Sesibili saseHarbin Medical University, esasungulwa ngonyaka we-1954, siyisibhedlela esikhulu sokuqala esigcwele seBanga lesi-3. Sihlanganisa ukwelashwa, ukufundisa, ucwaningo lwesayensi, ukuvimbela, ukunakekelwa kwezempilo nokuvuselelwa.
Isibhedlela sihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-500,000 nendawo yokwakha engama-530,000 square metres. Unomnyango owodwa weziguli ezigula ngaphakathi, iminyango engu-11 yeziguli ezigula ngaphakathi kanye nezibhedlela ezine "eziphakathi nendawo" -isifo samathambo, isibhedlela sesifo senhliziyo, isibhedlela esibhekene nesibhedlela sikashukela. Kunabasebenzi abangaphezu kuka-4500 esibhedlela. Njenge-Clinical Medical College yesibili yaseHarbin Medical University, inamazinga amathathu obudokotela ahlinzeka amabala wokukhuthazwa kwezinga lokuqala, ama-degree angama-21 obudokotela anikeza izindawo zemikhakha yesibili, kanye nama-degree angama-33 obudokotela namakhosi anikeza izindawo zemikhakha yesithathu.
Esibhedlela, kunamamitha-skwele ayizi-5,200 esakhiwo esizimele sokufundisa, amamitha ayizikwele angama-5 000 e- "National Experimental Teaching Demonstration Center" kanye ne "National Virtual Simulation Experimental Teaching Center", amamitha-skwele angama-22,000 "esisekelo sokuboniswa komtholampilo sodokotela abajwayelekile", 14,000 amamitha ayisikwele amafulethi e-undergraduate kanye namamitha-skwele ayi-16,000 wezindawo zokuhlala iziqu. Kusukela kuHlelo Lweminyaka Eyisi-12, izincwadi zokufunda eziyi-18 zikazwelonke kanye nezincwadi ezifundwayo ezilalelwayo nokubukwayo zihlelwe kakhulu ngabantu abafanele besibhedlela sethu, kwathi izincwadi eziyi-12 zahlelwa ngozakwethu njengabahleli abasondelene nabo kanti abanye ozakwabo babambe iqhaza ekuhlelweni kwezincwadi ezingama-47 . Eminyakeni emithathu eyedlule, sekuvunyelwe inani lamaphrojekthi wokufundisa angama-51 ngaphezu kwezinga lomnyango wedolobha, kufaka phakathi iphrojekthi ye-1 CMB; Imiphumela yokufundisa engaphezulu kwezinga lomnyango wedolobha seyitholakele; Kushicilelwe amaphepha okufundisa kazwelonke angama-94. Sebenza ngenkuthalo ukushintshisana kwamanye amazwe nokubambisana, ube nokuxhumana okuningana namanyuvesi angama-26 nezikole zezokwelapha, kufaka phakathi iYunivesithi yasePittsburgh, iYunivesithi yaseMiami, neYunivesithi yaseToronto eCanada, futhi benze ukubambisana okuningi kocwaningo lwesayensi.